蝶をお鼻に乗せた愛らしいくまのプーさん。 キュートな表情でお部屋に癒しを届けてくれそう！ © DISNEY bit.ly/WinniethePooh0420
Play poker with style and becomeapoker star!
1ère démarque été 2020 en PROMO ☀ Commande-> Livraison(Gratuite)-> Vérification et Essayage-> Paiement
This deal ends soon! Order your branding survival guide now and receive an instant digital version to get started with today. Just $5 with the code BRAND5 at checkout. If you’re ready to define your brand and scale your business, don’t wait another day to get these tips ⬇️ https://mtck.co/2JbDK3l
☀️Summer Collection Breastfeeding Clothes มาแล้ว พร้อมต้อนรับsummer ด้วยโปรโดนใจคุณแม่ เพียงช้อปผ่านไลน์แอด รับส่วนลดทันทีชุดละ100 บาท จากสินค้าราคาเต็ม ซื้อ1ชุด ลด 100 บาท ซื้อ2ชุด ลด200 บาท ซื้อ3ชุด ลด300 บาท ซื้อ10ชุด ลดไปเลย 1,000 บาท ค่ะ ช้อปครบ 3,000 จัดส่งฟรี EMS แม่ๆรีบช้อปกันน้า โปรเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 30เมษา 62 #เดรสให้นม#เสื้อให้นม#นมแม่#นมแม่แน่ที่สุด#เลี้ยงลูกด้วยนมแม่#ปั้มนม#ชุดให้นมออกงาน#ชุดให้นมแฟชั่น#ชุดครอบครัว#ชุดคู่แม่ลูก#ชุดคลุมท้อง#ของใช้แม่และเด็ก#เครื่องปั้มนม#สินค้าแม่และเด็ก#เด็กแรกเกิด #วิตามินเด็ก
THREE STAR Air-Con SaLe & Service
ကျနော်တို့ Three Star Air-con Engineering Group မှ ⭐ Air-con Brand New မျိုးစုံ ⭐ ရေခဲသေတ္တာများ ⭐ အဝတ်လျှော်စက်များ ⭐ Air-con အပိုပစ္စည်းများ ⭐ ရေခဲသေတ္တာ အပိုပစ္စည်းများ ⭐ အဝတ်လျှော်စက် အပိုပစ္စည်းများ စသည်တို့ကို ဈေးနှုန်းချိုသာ/မှန်ကန်စွာဖြင့် ရောင်းချပေးနေပါသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ Air-con / ရေခဲသေတ္တာ Deep Freezer/ အဝတ်လျှော်စက် Chiller / Cold Storage Cake Counter အိမ်တွင်းသုံး / လုပ်ငန်းသုံး / စက်ရုံသုံး စသည့် ပစ္စည်းများကို အိမ်တိုင်ရာရောက် ပြုပြင်ခြင်း ၊ တပ်ဆင်ခြင်း ၊ ဆေးကြောခြင်း၊ ရောင်းဝယ် လဲလှယ်ခြင်း ၊ ငှားရမ်းခြင်းများကို ဈေးနှုန်းမှန်ကန်စွာဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေပါသည်။ Three Star Engineering Group တွင် ‍‍‍‍‍ ၀ယ်ယူအားပေးခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သောအားသာချက်များ - အာမခံ (warranty) ဖြင့် ပြုပြင်ပေးခြင်း။ အာမခံဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်ပေးခြင်း။ အဆင်မပြေမူဖြစ်ပေါ်လာပာက အချိန်တိုအတွင်း လာရောက်ပေးခြင်း။ တပ်ဆင်မည့် Area များကို အခမဲ့ လာရောက်တွက်ချက်ပေးခြင်း။ အထူးဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေးခြင်း တပ်ဆင်ပြီး ဈေးနှုန်း 1 HP - 340000 Ks 1.5 HP - 390000 Ks နာမည်ကြီး Brand ဖြစ်ခြင်း Compressor အထူးအာမခံ (၃)နှစ်ပေးထားခြင်း Japan Brand Compressor များကိုအသုံးပြု ထားခြင်း အခန်းတွင်း လျင်မြန်စွာအေးစေရန်အတွက် Four Ways Air Flow Systemကို အသုံးပြုထားခြင်း လှပသေသပ်သည့် Design ရှိခြင်း စသည့်အရည်အသွေးများနဲ့ ပြည့်စုံသော CHANGHONG Split Type Brand New Air-conများကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် အိမ်အရောက် တပ်ဆင်ရောင်းချပေးနေပါသည်။ #ပါဝင်သောပစ္စည်းများ Safeguard ၊ Frame ၊ Installation ၊ Copper Pipe (10 Ft) ၊ Drain Pipe ၊ Control Wire ၊ Accessories ၊ Transportation ⭐️⭐️⭐️⭐️ ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ မြို့နယ်များတွင် ဆိုင်ခွဲပေါင်း (7)ဆိုင် ရှိသည့်အတွက် မိမိတို့နှင့်နီးစပ်ရာ ဆိုင်ခွဲများသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည် ။ ➡️➡️➡️နီးစပ်ရာဆိုင်ခွဲများတွင် ဝယ်ယူနိင် ပါပြီ……… ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ #Show Room @ ဘေလီမှတ်တိုင်အနီး ၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ☎️☎️☎️09-5087877, 01-705784 #Service Center(1) @ မြင်သာဈေးအနီး ၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ☎️☎️☎️09-5163480, 01-705784 #Service Center(2) @ ဘုရင့်နောင်လမ်းမ ၊ လှိုင်မြို့နယ် ☎️☎️☎️09-401505153, 09-420186543 #Service Center(3) @ အောင်ချမ်းသာအိမ်ရာ ၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ☎️☎️☎️09-428192157, 09-252833530 #Service Center(4) @ မိုးမခလမ်း ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ☎️☎️☎️09-450047285, 09-420047154 #Service Center(5) @ ၉၄ လမ်း ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ☎️☎️☎️09-420047153, 09-250069932 #Service Center(6) @ သုဓမ္မာလမ်းမ ၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ☎️☎️☎️09-43131601, 09-400882811, 09-421139126
Your new OG BB has arrived. Enjoy amazing all-day coverage with our vegan mix of BB cream and foundation. With added SPF 50 too! Shop now!
A spooktacular collection to get you into the Halloween spirit.
A Hora do Voto – Aprenda como deixar sua campanha eleitoral mais profissionaleeficiente.
Are you deliberating on pursuingatop-class international MBA? Here'sa30-min live session from the experts at QS (publishers of the QS World MBA & World University Rankings). We'll discuss the questions you need to ask before pursuing an MBA, the benefits of an MBA in the UK & the diverse career outcomes it opens up.
⚠️⚠️ SNIZENJE DO VECERAS ⚠️⚠️ CIJENA MODELA #34KM,SAMO #34KM ‼‼DVA PARA #57KM SAMO #57KM‼ NAJTRAZENIJI MODELI PONOVO NA STANJU,SAMO KOD NAS VRHUNSKI KVALITET DOSTAVA NA KUĆNU ADRESU PLAĆANJE PRILIKOM PREUZIMANJA PREGLEDANJE ROBE PRIJE PLAĆANJA DOSTAVA6KM.